Vishnu: Mid ka mid ah ilaahyada ugu muhiimsan Hindiya | Safarka Absolut
Isabella | | Hindiya
Ma jeceshahay inaad u safarto Hindiya fasaxaaga dambe oo aad xiiseyneyso inaad wax badan ka ogaato dhaqankeeda iyo caadooyinkeeda? Mid ka mid ah dhinacyada ugu yar ee laga yaqaan reer galbeedka waa diinta Hinduuga, oo aad muhiim u ah in la ogaado habka fikirka iyo dareenka dadka deggan Hindiya.
Diinta Hinduuga waxaa ka buuxa sheekooyin iyo cajaa'ibyo cajiib ah oo ay sameeyeen ilaahyo, jinniyo, jinniyo, dad, iyo makhluuqaad kale. Si kastaba ha noqotee, ilaahyada ugu waaweyn ee Hinduuga waa seddex: Brahma, Vishnu iyo Shiva. Mid kastaa wuxuu metelaa xoog lama huraan u ah jiritaanka koonka: uumihiisu waa Brahma, xoogga sii socoshada waa Vishnu iyo awoodda wax burburisa waa Shiva. Dhamaan seddexduba waa Trimurti ama "seddex qaab" Sanskrit, taasi waa, midnimada Hinduuga.
Door noocee ah ayey leedahay Trimurti-ku? Maxay yihiin doorarka ilaah kasta oo ku dhex jira? Qoraalkan waxaan ku dhex gali doonnaa diinta Hinduuga si aan u baranno seddexdan ilaah waxyar oo kafiican gaar ahaan Vishnu. Sii wad akhriska boodka ka dib!
2 Waa kuma Vishnu?
2.1 Fasiraadda anshaxa ee Vishnu
3 Sidee lagu sharaxay Vishnu?
4 Waa maxay astaamaha fiqi ahaaneed ee Vishnu sidee baa loogu xurmeeyaa?
4.1 Waa maxay avatarka Vishnu?
4.2 Da'da aadanaha
Sidaan idhi, saddex waa ilaahyada ugu muhiimsan ee Hinduuga: Brahma, Vishnu iyo Shiva. Dhammaantood waxay sameystaan ​​trimurti mid walibana wuxuu leeyahay awood uu ku gaaro isku dheelitirka koonka, si aysan suurta gal u aheyn in la uuraysto abuurista (Brahma) ama burburka koonka (Shiva). Intaas waxaa sii dheer, run ahaantii ilaalinteedu waa awood ilaalinaysa nidaamka cosmic. Tani waa sida aaminka ah ee diintaani u fahmaan caalamka oo markaa muhiimadda weyn ay u leeyihiin ilaahyadan ku dhex jira.
Laga soo bilaabo Brahma Brahmanism waxaa lagu aasaasay Hindiya. Qeyb ka mid ah Hinduuga oo u tixgeliya inuu yahay ilaah ka sarreeya, asalka ilaahyada kale oo dhan, kuwaas oo muujinaya isaga. Laga soo bilaabo duulaankii Aryan, Brahmanism wuxuu dhashay, oo u arkay Shiva iyo Vishnu inay yihiin ilaahyo yaryar.
Waa kuma Vishnu?
Waxaa loo aqoonsan yahay diinta Hinduuga inuu yahay ilaaha wanaagga iyo dhowrista, isagu waa ilaaha weyn ee xilligan Vaisnavism-ka. taas oo ah laanta Hinduuga ee leh Vishnu ilaaha ugu sarreeya. Sida laga soo xigtay waqtigan xaadirka ah, isagoo ah abuuraha koonka, ilaahkan wuxuu go'aansaday inuu isku muujiyo trimurti ama "saddex qaab."
Vishnu waxaa lagu soo oogay hadafka ah isu dheelitirka wanaagga iyo xumaanta adduunka, bina aadamkuna wuxuu weydiisanayaa caawimaaddiisa helitaanka jidka badbaadada.
Fasiraadda anshaxa ee Vishnu
Markii la falanqeynayo magaca ilaahnimadiisa asal ahaan, qeyb ka mid ah asalka "vis" waxaa loola jeedaa in la dego ama la dhexgalo taas oo imaaneysa si ay u muujiso mid ka mid ah tayada Vishnu "kan wax walba ku faafay."
Sidan oo kale, gabagabada ayaa lagu gaadhay in magiciisa loola jeedo ilaaha uur yeeshay dhammaan waxyaalaha iyo noolaha adduunka ku nool. Laga bilaabo qormadan, Vishnu kuma koobna waqtiga, booska ama walaxda. Awoodiisa waxay noqotaa mid aan xad lahayn. Sidoo kale, waxaa jira cilmi-baarayaal ku adkeysanaya in fasiraadda astaamo ahaaneed ee magaca ay tahay "taas oo wax walba dhex galaysa."
Sidee lagu sharaxay Vishnu?
Waxaa badanaa lagu matalaa inuu yahay ilaah midab buluug ah leh qaab dad iyo afar gacmood oo haya walxo kala duwan oo xambaarsan macno kala duwan:
Padma (ubax lotus ah oo udgoonkiisa Vishnuists jecel yahay)
A sudarshaná chakrá (foosha oo la mid ah tan ay xirtaan halgamayaasha hal ninja ee Vishnu u adeegsado baabi'inta jinka)
Shankhá (qolof cagaf ah oo dhawaqeeda Hindiya ka dhigan tahay guul ka dib markii laga adkaaday cadow)
Mace dahab ah (si loo burburiyo madaxyada kuwa sharka leh)
Waxaa badanaa la muujiyaa isagoo ku fadhiya ubax lotus ah Laksmi, saaxiibtiis, mid ka mid jilibkiisa. Iyadu waa ilaahadda nasiibka waxayna isu muujisaa bhuti-sakti (abuur) iyo kriya-sakti (waxqabad hal abuur leh). Maaddaama Vishnu uusan qeyb ka noqon karin hal-abuurkiisa (ahamta) ama xooggiisa, wuxuu u baahan yahay wada-shaqeyn mar walba la joogta. Sababtaas awgeed ilaahadda Laksmi waa inay la socotaa Vishnu dhammaan jidhkeeda.
Waa maxay astaamaha fiqi ahaaneed ee Vishnu sidee baa loogu xurmeeyaa?
Ilaaha Vishnu wuxuu leeyahay astaamo rabbaaniyadeed oo kaladuwan: helitaanka waxa uu doonayo (prakamya), sarreynta (isitva), tayada xakamaynta rabitaanka (kama vasayitva), xakamaynta dadka kale (vasitva), gaaritaanka wax kasta (prapti), awoodaha ka sarreeya (aishwaria), aqoonta (gnana) ama tamar (shakti), iyo kuwo kale oo badan.
Si dhab ah looma oga goorta ama sida Vishnu u bilaabay cibaadada. Isku soo wada duuboo waxyaabaha ay rumeysan yihiin Aryans (Vedas) ilaahaan wuxuu xiriir dhow la leeyahay Indra wuxuuna u kala saaray ilaah yar. Mar dambe oo keliya ayuu ka mid noqday trimurti-ka diinta Hinduuga iyo ilaaha ugu muhiimsan ee iimaankan oo dhan.
Maanta Hindusku waxay rumaysan yihiin in Vishnu uu u ekaaday sida avataar kala duwan oo Dunida ah ilaahna waxaa lagu caabudaa qaab avatars-ka ah oo si daacad ah.
Waa maxay avatarka Vishnu?
Hinduuga dhexdiisa, avatar waa soojiidashada ilaah, gaar ahaan Vishnu. Taasi waa, oo u dhiganta damiir-yaqaanka quraafaadka Greco-Roman. Vaisnavism gudaheeda, avataarradan waxay ku shireen fasallo kala duwan iyadoo loo eegayo shakhsiyadda iyo doorka lagu qeexay Qorniinka.
Vananá: Ninkii, wuxuu ku soo baxay ruse-iugá.
Matsia: kalluunka, wuxuu ka muuqday satia-iugá.
Kurma: qoolleyda, waxay ku soo baxday satia-jugá.
Varaja: xayawaanka duurjoogta ah, ayaa ka muuqday satia-iugá.
Narasinja - Libaaxa badh, nin badh jidh ahaan. Wuxuu u baxay satia-iugá si uu uga adkaado jinka Jirania Kashipú.
Parashurama: (Rama leh faas), wuxuu u muuqday treta-iugá.
Rama: boqorka Aiodhia, wuxuu ku soo baxay treta-iugá.
Krishna: (soo jiidashada leh) wuxuu ka muuqday duapara-iugá, oo uu weheliyo walaalkiis Balaram. Dhaqdhaqaaqyada Visnuist badankood waxay u arkaan inuu yahay shaqsiyan Vishnu.
Buddha: (xikmadda) waxay ku soo baxday Kali-iugá. Noocyada aan ku xusin Buddha sida gobolka sagaalaad ee avatar Balaram halkii.
Kalki: kan wax dumiya nijaasta. Waxaa lafilayaa inay soo muuqato dhamaadka kali-iugá.
Hinduuga Hinduuga iuga waa mid kasta oo ka mid ah afarta waayi oo waayi weyn ama majā iuga loo qaybiyo. Afarta xilli ama iugas waa:
Satia-iuga (xilligii runta): 1.728.000 sano ayuu jiray.
Duapara-iuga: 864.000 sano ayuu jiray.
Treta-iuga: 1.296.000 sano jir.
Káli-iuga: waagii jinni ee Kali 432.000 sano.
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Vishnu: Mid ka mid ah ilaahyada ugu muhiimsan Hindiya
Runtii waan jeclahay wax walba oo la xiriira dhaqanka Hinduuga,
Ku jawaab ingrid
Runtu waxay tahay, tani waa sharaf dhac. Haddii ay baran lahaayeen cilmiga waxay ogaan lahaayeen sida karaahiyada u ah inay akhriyaan maqaalkan.
i ma ragaxdaa
Waxaan aaminsanahay dib u dhalashada waxaanan u malaynayaa inay gabadhu noqon karto, waan ku faraxsanahay diinta Hinduuga maxaa yeelay ma aysan lumin caqiidadooda, qiyamkooda, dhaqankooda, waan jeclahay dhaqankaas.
Jawaab Ruth Maria Ortiz
Aniguba waan jecelahay dhaqankaas, laakiin hal qof oo kaliya ayaa yiri dhalan-rogga xun ee gabadhaas ayaa liidaya. Oo iyagu ha u caabudeen iyada oo ah Ilaah ...
Marka la soo koobo, mid kasta oo waalanaya.
Ku jawaab Tamara Garcia
waa maxay ilmo xun
Runtu waxay tahay inaan fahansanahay gabadha, waxaan aaminsanahay inay tahay dib u dhalasho maadama ay aad uxiiso badantahay laakiin jirkeedu waa mid aad uxiiso badan maadaama ay lamid tahay Vishnu
Ku jawaab alegandro
Hoos-u-dhac, cabsi, wax karaahiyo ah, waa maxay bahal cajaa'ib leh
Ku soo jawaab Adelaide
caddaan casaan ah dijo
Waxaan u maleynayaa inay tahay inaan sifiican u baareyno hadii aan tagno ama aan rabno inaan wax ka wada hadalno halkaas waxaa ka muuqata gabar dhalinyaro ah oo dhaheysa waan jecelahay dhaqankaas. Haddii aadan aqoon waxa aad sheegayso, waxaa wanaagsan inaadan faallo ka bixin. Jaahilnimadaas ka jirta waddankaas ayaa ah waxa baabi’iyay Hindus-ka tan iyo markii ay aqoonsan la’yihiin ALLE WEYN, Ilaaha nool ee jira iyo midka Kaliya ee u beddeli kara noloshooda mugdiga iyo murugada leh ee kuwa maanta ku jira.
Ku jawaab blnca rosa
Alejandro, haddii aadan ogeyn waxa meesha ka socda, waxaad fiicnaan laheyd inaad baarto wax kasta oo ka dambeeya waxyaabahaas. In dadku u dhintaan aqoon la’aan iilama muuqato wax lagu qoslo, wax yar baa ka sii daran inay rumeysan yihiin ilaahyo dadka u keenaya keliya dhimasho, saboolnimo iyo nasiib darro Waxaan u maleynayaa in ka hadlida saboolnimada iyo murugada ay qabaan dadkaas masaakiinta ah ee Hinduuga ah inaysan aheyn wax lagu qoslo.
iftiinku wuxuu ku socdaa 300,000 kilomitir ilbiriqsi, xiddiga ugu dhow dhulka wuxuu u jiraa 4 sano oo iftiin ah, kuwani waa xog ka baxsanaya fahamkeena masaafada iyo waqtiga, laakiin waxaan sii wadeynaa inaan aaminno sixirka, ku noqoshada rabbaaniga ee nadiifinta nafta. , laakiin wali ma arki karno ballaadhnaanta koonkan (isku dhufo 300,000 X 60 X 24 X 365 X 4 waa masaafada km ee xiddigta ugu dhow dhulka) haddii ciidda dhammaan xeebaha adduunka, hadhuudh kasta oo ciid ah si dhib yar ayeey noqon doontaa galaxis taas oo iyana ka kooban malaayiin xiddigood waxaana ka mid nahay galaxyadaas midkood. Runtii waxay ku saabsan tahay uun ku noolaanshaha iyo nooleynta, ma jirto nolol kale, ma jirto saacad kale, rumaynta abuurka rabbaaniga ahi way ka sahlan tahay sharraxaadda adduunyada aan dhammaadka lahayn ee aan si dhib yar wax ugu nahay. WAQTIGII LA SOO KIINAAYO
Ku jawaab efrain
Waa inaan ku siiyaa jug si aad u geliso sawirkaas, waalan
Ku jawaab anicurno
hello .. waxaan rabaa oo kaliya inaan .. ku tuso tan .. fiiri foodda .. astaanta ay keensato .. oo aad barbar dhigto astaanta Masaarida. madaxooda ka korreeya .. mahadsanid .. waa wax xiiso leh ..
Waxaan u maleynayaa in dembiga uusan ka imaaneyn wiilkii qortay buuga, madaama oo aad nafsadaada ku wargelineysid ma xuma, KII CADNA WUXUU LEEYAHAY ARAGTIDA HINDU, ISTICMAAL KU SAABSAN WAXA LAGU AAMINSAN YAHAY, XAQIIQDA AAD KA HESHO IN AAN LAGA HELIN WAA KELIYA OO KA WARBIXINAYA ... WAXA AAD RUMAHAN TAHAY AMA AAN LAHAYN DHAQANKAN WAA QOFKA OO DHAN GO'AAN ... OO AAN HALKAN LAGA HADLI LAHAYN. XUN XUN WAA SAWIRKA WAAYO AY SOO BANDHIGTAY QAYBAHA UGU DANBAYSA EE GABADHU, WAA INAY SAMEEYAAN WAJIGEEDA IYO NOLOSHEEDA ...
Waan ixtiraamayaa dhaqankooda laakiin maxaan u caabudaa sawirada beenta ah sababtuna waxay tahay saboolnimo darxumo ku ah dharkooda jilicsan iyo sidoo kale dib udhaca maskaxdooda ma ahan kaliya qalbi ku filan laakiin sidoo kale caqli, layaab malahan inay leeyihiin caruur ku liidata aaminaada ilaahyadooda qosolka badan